Warar - Falanqaynta fashilka iyo xalka haddii qiiqa qiiqa mishiinka naaftada aan caadi ahayn
Hawlgalka caadiga ah ee mishiinka naaftada leh culeyska, midabka qiiqa qiiqa waa cawl khafiif ah caadi ahaan, marka rarku xoogaa culus yahay, waxaa laga yaabaa inuu noqdo cirro madow. Halkan midabka qiiqa qiiqa oo aan caadi ahayn waxaa loola jeedaa qiiqa qiiqa waa madow ama qiiqa qiiqa waa cadaan ama qiiqa qiiqa waa buluug
1 black Qiiqa madow wuxuu tilmaamayaa gubida shidaalka naaftada ee qolka gubida kuma filna.
Falanqaynta Guul darrada:
Mashiinka 〉1〉 wuu buux dhaafay
〈2〉 Dheecaanka saliidda ee mashiinka shidaalka geliya, atomikada oo liidata
〈3〉 Waqtiga shidaal la siinayo waqti hore
1〉 Dheellitir culeyska, ku samee cabbir kala duwan
2〉 Marka mashiinka naaftada ah ee hawl la’aanta ah, dabciyo isku xiraha tubbada irbadaha ee cadaadiska sare mid mid si aad u joojiso cirbadeynta shidaalka ee irbadaha, daawashada midabka qiiqa: xawaaraha mishiinka ayaa si aad ah hoos ugu dhacaya ka dib cirbad joojinta haddii uusan cilad jirin ku jira qalabka shidaalka. Haddii ay dhacdo in cirbadeha uu shaqeyn waayo, xawaaraha mishiinka aad ayuu isu beddelayaa, qiiqa qiiqa ma noqon doono madow ka dib marka cirbaddu istaagto. Waa inuu hubiyaa oo hagaajiyaa cirbadaha.
3〉 Marka loo eego qeexitaannada, hubi sii wadista shidaalka xagalka
Shuruudaha loogu talagalay cirbadaha cirbadaha: waa inuu lahaadaa cadaadis cirbad oo gaar ah, kala duwanaansho cayiman iyo xagal buufin xagal, buufin ayaa wanaagsan. Cirbadeynta shidaalka waxay si deg deg ah u joojin kartaa dhamaadka saliida, malahan dheecaan saliid ah, ifafaalaha saliida uur leh
qiiqa cad wuxuu muujinayaa dhibcaha saliida naaftada ah ee qolka gubida inuusan gubin
1〉 Waxyeellada suufka silsiladda;
2〉 Waqtiga keenista saliida waa soo daahay
〈3〉 Biyaha saliida shidaalka.
beddel suufka silsiladda cusub
2〉 Marka loo eego qeexitaannada, hubi sii wadista shidaalka xagalka
3〉 Ku rakib saliida shidaalka iyo biyaha
Si loo helo daboolid wanaagsan, goomaha silsiladda waa in la dhigaa inta u dhexeysa madaxa silsiladda iyo silsiladda. Adkee madaxa silsiladda dusha silsiladda biinanka oo waa inuu lahaadaa amar gaar ah, sida udub dhexaad u ah amarka kordhinta dhowr jeer, ugu dambeyntiina kala-bax xaddidan si loo adkeeyo qiimaha miisaanka sida ku xusan buuga .. Ka saar balkaha iyo kuxigeen.
3 、 qiiqa buluugga ah wuxuu tilmaamayaa in xarigga saliidda ee qolka gubashada.
〈1〉 Heerka saliida ee kuuskuusku waa mid aad u sareeya
Ring2〉 Faraanti saliid ah oo ku dhex dhegan jeexdin giraan ama jeexitaan
〈3〉 Isku xirida ul qaadida iyo iskuxirka joornaalka cadeynta waa mid aad u weyn
〈1〉 Saliidda saliidda ku jirta ku hayso miisaan buuxa, oo ku daa qaar ka mid ah saliidda mashiinka waqtigeeda;
2〉 Nadiifi giraanta giraanta guntin jeexitaanka kaarboonka, beddel giraanta saliidda;
3〉 Ka qaad digsiga saliida, isku xirida boolida usha lagaa saaray, dareen leh hadii ay jiraan calaamado gubasho dhalid dusha sare ah, hadii ay haa tahay, bedel qolofka isku xirida usha.
Falanqaynta fashilka iyo xalka haddii naaftada g ...
Hawlgalka caadiga ah ee mishiinka naaftada leh culeyska, midabka qiiqa qiiqa waa cawl khafiif ah caadi ahaan, marka rarku xoogaa culus yahay, waxaa laga yaabaa inuu noqdo cirro madow. Halkan midabka qiiqa qiiqa oo aan caadi ahayn waxaa loola jeedaa qiiqa qiiqa waa madow ama qiiqa qiiqa waa cadaan ama qiiqa qiiqa waa buluug 1 black Qiiqa madow wuxuu tilmaamayaa duqsiga ...